19 July 2010 yeyintnge Diary.doc file here19 July 2010 yeyintnge Diary.doc5.59MB19 July 2010 Yeyintnge Diary Summary only...
7/18/2010 မြန်မာ နိုင်ငံတွင် တပ်မတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးကို သူတည်ထောင်ခဲ့သော တပ်မတော်က ၁၄ နှစ်ကျော်ကြာအောင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားသည်ဟု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေသော ဘင်္ဂလီ သတင်းစာ တစောင်က ဖေါ်ပြသည်။၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိူင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့အချိန်ထိ ကမ္ဘာ့ တလွှား ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များကို ဖေါ်ပြရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကို ထိုသို့ ရေးသား ဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။အဆိုပါ သတင်းစာမှာ Kalerkanto သတင်းစာဖြစ်ပြီး ဇူလိူင်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တခြား ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြသည့် အိန္ဒရာဂန္ဒီ၊ မာဂရက်သက်ချာ၊ ဘန်နီဇီယာ ဘူတိုစသည့် အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ၏ ပုံများနှင့် အတူ ပူးတွဲ ဖေါ်ပြထားသည်။အဆိုပါ သတင်းစာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပညာသင်ကြားခဲ့သော ကျောင်းများနှင့် ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့ပညာများကို ဖေါ်ပြထားပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်က မိခင်နာမကျန်း ဖြစ်ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာရာမှ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးတွင် ပါဝင်လာရပုံများကို ဖေါ်ပြထားသည်။၎င်းပြင် မြန်မာ့ စစ်အစိုးရသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာသိကျေညာပြီး အထွေထွေ ရွှေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ၈၅ ရာခိုင်နုန်းကျော် အနိုင်ရသောအခါ အာဏာကို လွဲပြောင်း ပေးအပ်ခြင်း မရှိဘဲ ဒေါ်စုကို ဆက်လက် ဖမ်းဆီးပြီး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားမူ ပြုလုပ်ထား ကြောင်း ဖေါ်ပြ သည်။ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ဒက္ကားမြို့ မီပူရ် ၁၀ မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တဦးကို အဆိုပါ သတင်းစာပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းနှင့် ပတ်သက် မေးမြန်းကြည့်ရာ သူက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။“ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဗမာပြည်က ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဆိုရင် လူတိုင်းလိုလိုက သိရှိကြပြီး သူမအပေါ် ဂရုဏာ သက်သူတွေက ပိုများပါတယ်။ သူမဟာ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် စွန်းစွန်းတမံ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်ပြီး သူမကို ဗမာပြည် စစ်တပ်က မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ သမ္မတ ဘယ်သူ ၀န်ကြီးချုပ် ဘယ်သူဆိုတာကို ကျွန်တော့် ပြည်သူတွေ မသိကြပါ။ သူမကိုသာ သိရှိကြပါတယ်။ တနေ့ သူမ လွတ်မြှောက် လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများကို သတင်းစာများ၊ ဂျာနယ်များတွင် ယခုကဲ့သို့ မကြာခဏ ဖေါ်ပြလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။http://www.narinjara.com/burmese.asp
အာဇာနည်နေ့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ နဲ့ ဒီကနေ့ တပ်မတော် VOA ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၀ “ - - - -ဗိုလ်လောင်းပစ္စည်း အဟောင်း အမျဉ်းတွေ ထားတဲ့ စတိုးခန်းကြီးတွေမှာ၊ ပစ္စည်း အဟောင်းပုံတွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတွေ တွေ့ခဲ့တဲ့နေ့က စပြီး ကျနော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါ - - -” မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက တပ်မတော်ရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မှေးမိန် ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ ပတ်သက် ပြီး၊ ခေတ်သစ် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော အပါအ၀င် တခြား တပ်မတော်အရာရှိ ဟောင်းတွေနဲ့ ဗီအိုအေ ၀ိုင်းတော်သား ဦးရော်နီညိမ်း မေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာကို၊ ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းက မနှစ်က အာဇာနည်နေ့မှာ "မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်း" ကဏ္ဍ ကနေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၉) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ (၆၃)နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်၊ ဒီတပတ် “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” အပတ်စဉ်ကဏ္ဍ မှာ၊ ဒီအစီအစဉ်ကို ပြန်ပြီး ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တကွ ကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ခံနေကြရပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ဒီကနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍမှာ ထားရှိနေကြတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဗမာ့တပ်မတော် ရဲ့ ခေတ်ဦး၊ ခေတ်လယ်၊ လက်ရှိခေတ်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ ကျနော်ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတော့ ဗမာ့တပ်မတော်ကို စတင် တည်ထောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇောကို ကျနော် ဆက်သွယ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် သူ့ရဲ့ သဘောထား၊ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ထင်မြင်ချက်၊ အာဇာနည်နေ့ အပေါ် သူ့ရဲ့အမြင်တွေ ကို အသံဖိုင်နဲ့ ပေးပို့ထားပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇော ပြောဆိုတာကို နားထောင်ကြရအောင်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော။ ။ ကျနော့်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခု စွဲစွဲမြဲမြဲ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဗိုလ်ချုပ်သာ မကျဆုံးရင် ဗမာပြည်မှာ စစ်အာ ဏာရှင်စနစ် မပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူး။ ပြည်သူတွေလည်း ဒီလောက် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာ မဟုတ် ဘူး။ ဒါကတော့ ကျနော့် ယုံကြည်ချက်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးကို လက်နက်နဲ့ တိုက်ယူဖို့လိုတယ်လို့ သဘောပေါက်လာတော့ တခြား တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ် ခေါင်းဆောင်များနဲ့ စုစည်းပြီး ဗမာ့တပ်မတော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့လူပါ။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDAက ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့တုန်းက၊ စပြီး တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရမယ့် နေ့ မူလသတ်မှတ်တဲ့ ဧပြီ(၂)ရက်နေ့ အစား လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ မတ်လ(၂၇)ရက်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့သတ်မှတ်ပေးဖို့ တော်လှန်ရေး စစ် တိုင်းကြီးအမှတ်(၄)ရဲ့တိုင်းမှူး အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်မှူးကျော်ဇော တင်ပြခဲ့တာကို လက်ခံခဲ့တဲ့အထိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကျော် ဇောကို ယုံကြည်အားထားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရိုးသားမှု၊ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်နဲ့ အရည် အချင်းတွေကို ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောက အခုလို ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာ အလွန် ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီကိုလည်း ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်း အရလည်း တိုင်းပြည်ကို နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အခြေခံတိုင်း ချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ယခုခေတ် တပ်မတော်သားများ အပါအ၀င် ဗမာပြည်သူအားလုံး လေ့လာ အတုယူသင့်ပါတယ်။ ဒီ့အ တွက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားတွေကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ကျင်းပပြီး လှုံ့ဆော် ပညာပေးသင့်ပါတယ်။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ အာဇာနည်နေ့ဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကြားခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီ နောက်မှာတော့ မြန်မာ့တ ပ်မတော်ရဲ့ ခေတ်လယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ၁၉၆၀ခုနှစ်မှာ OTS အပတ်စဉ်(၂၆)ကနေ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်း၊ တပ်မတော် အရာရှိ ဖြစ်လာပြီးတော့ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှာ စစ်ဦးစီးမှူးပထမ တန်း G(1) အဆင့်အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အငြိမ်းစား ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အေးမြင့်ကိုလည်း သူတို့ခေတ်က တပ်ထဲက အာဇာနည်နေ့ အကြောင်း သိနိုင်ဖို့ ကျနော် ဆက်သွယ်မေး မြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အေးမြင့်။ ။ ဪ ဗိုလ်ချုပ်က တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ၊ ဒါတင် မကဘူးလေ၊ တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဆိုတော့ တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကျဆုံးတဲ့နေ့ အာဇာနည်နေ့မှာတော့ တပ်တိုင်း၊ တပ်တိုင်းက ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်နဲ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတွေ ဘာတွေ လုပ်ကြတာပေါ့လေ။ နော်။ နောက်ပြီးတော့ တပ်ထဲ မှာ ဆွမ်းကျွေးတာတို့ ဒါတွေတော့ လုပ်ကြတာပါပဲ။ ထုံးစံကတော့။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒီ ထုံးစံမျိုးက အခု မရှိတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ ထုံးစံမျိုးကိုလည်း မလုပ်ရဘူး ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေ၊ အမိန့်တွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့ အခုဟာ ထုံးစံဆိုတာ သူတို့အတွက် တအံ့ တသြကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အေးမြင့်။ ။ ဟိုတုန်းကတော့ အာဇာနည်နေ့မှာ ဘာမလုပ်ရ၊ ညာမလုပ်ရ ဆိုတာမျိုး တပ်ထဲမှာ တစ်ခါမှ အထက်ဌာနချုပ်တွေက ညွှန်ကြားပြီး ပိတ်ပင်တာ မျိုး တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ ကိုယ်တို့ ခေတ်မှာတော့။ ဒီခေတ်မှာရှိတာကတော့ အတော် အံ့သြဖို့တော့ ကောင်းတယ်။ အဲ ဒီကောင်တွေ သိဖို့ ကောင်းတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတည် ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ရှိခဲ့လို့သာ သူတို့ ဒီကနေ့ ရာထူး စည်းစိမ်တွေ ရနေကြတာပဲ။ ဒါကိုမှ ကျေးစွပ်တဲ့ သဘောတွေ ရောက်တာပေါ့လေ၊ ဒီဥစ္စာကတော့။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။နောက်ထပ် ကျနော်ဆက်သွယ်ခဲ့သူကတော့ မြန်မာ့ တပ်မတော်ရဲ့ခေတ်လယ် အလွန် ၁၉၇၉ခုနှစ်မှာ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၀)က ကျောင်း ဆင်းခဲ့ပြီး ခြေလျင်တပ်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရာက၊ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှာ စစ်ဦးစီးမှူး(ဒုတိယတန်း) အဖြစ်နဲ့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နီးနီးကပ် ကပ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖူးပြီးတော့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြန်မာသံရုံးမှာလည်း သံမှူးကြီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်ပါ။ ဦးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ ကျနော် ၁၉၉၂ခုနှစ် မေလမှာ ကျနော် ဒီစစ်ရုံးကို စရောက်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ စပြီးတော့မှ အာဏာ ရယူပါတယ်။ သူ စရောက်ရောက်ချင်းပဲ ပေါ့လေ၊ နံပါတ်(၁)က သူတက်လာတဲ့ အချိန်က စပြီးတော့မှ အမိန့်ပေးတာ၊ အဲဒါ က တပ်တွင်းအမိန့်ကော တစ်နိုင်ငံလုံးကို အမိန့် ပေးတာကတော့၊ ဓာတ်ပုံကိစ္စ ပေါ့လေ။ အရင်တုန်းက၊ ဒီ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် လက်ထက် တုန်းက ဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းပုံ နှစ်ပုံရဲ့အောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ရဲ့ ပုံကို ထားပါတယ် ခင် ဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ တက်လာတဲ့ အချိန်အခါက စပြီးတော့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံလည်း မမြင်ချင်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းပုံလည်း မမြင်ချင်ဘူး။ ငါ့ပုံ တစ်ပုံတည်းပဲ ချိတ်ရမယ်၊ အ စည်းဝေးခန်းမတွေ၊ နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားတွေမှာ သူ့ပုံ တစ်ပုံတည်းကလွဲလို့ ဘယ်ပုံမှ မချိတ်ရဘူး ဆိုပြီးတော့မှ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ နှုတ်မိန့်လား ၊ စာနဲ့လား ခင်ဗျ။ ဦးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ စာနဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျ။ နှုတ်မိန့်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ရုံးတွေမှာ၊ ကျနော်တို့ သံရုံးတွေမှာ ပြန်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံက ကျနော်တို့ Store (ပစ္စည်းသိုလှောင်ခန်း)ထဲမှာ ရောက်နေတာကို သွားတွေ့ရပါတယ်။ နံပါတ်(၂)ကတော့ တပ်မတော်မှာ ကျနော်တို့ နေ့စဉ် တန်းစီပြီးတော့မှ အလေးပြုတဲ့အခါမှာ၊ တန်းစီကွင်းမှာပေါ့လေ။ ပုံမှန် အလေးပြုတဲ့အခါတိုင်း ယခင်အချိန်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် လက်ထက် အထိကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော ရဲဘော် အပေါင်းအား အလေးပြု ဆိုပြီးတော့မှ အလေးပြုရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့ ရှေ့ကစကားလုံးကို ဖြုတ်ခိုင်းပါ တယ်။ ဒါလည်း နှုတ်မိန့်ပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့က ကျဆုံးလေပြီးသော ရဲဘော်အပေါင်းအား အလေးပြုဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ရှေ့က နေပြီးတော့ တိုင်ပေးရတာ ရှိပါတယ်။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါတွေက အဲလို ဖြစ်ရတာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဘက် တစ်ယောက်ကို မလိုလားတဲ့ သဘောတစ်ခု သက်သက်ပဲလား။ ဦးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ လူအများကတော့ ထင်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မှေးမှိန်အောင်လုပ်တယ် ဆိုပြီး တော့မှ အများက ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါ တစ်ခုတည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေရဲ့ ပင်ကိုယ် စိတ်ဓာတ်ကိုက၊ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စတုတ္ထနိုင် ငံတော်ကို ထူထောင်တဲ့သူ ဆိုပြီးတော့မှ သူ့ကိုယ်သူ ခံယူထားတဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း တွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ ဘုရင့်နောင်ပုံတို့ အလောင်းဘုရားပုံတို့ ရုပ်တုတွေပေါ့ လေ၊ ရှောက်ထုပြီးတော့မှ သူသာလျှင် စတုတ္ထမြောက် မြန်မာနိုင်ငံကို ထူထောင်တဲ့သူ ဆိုပြီးတော့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပစ်ပယ်ပြီးတော့မှ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထက် သူက ပိုပြီး တော့မှ တော်တယ်၊ သူပိုပြီးတော့ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် သမိုင်းမှာ ကျနော်တို့ သင်ကြားခဲ့ဖူးတာ သူလည်း သင်ကြားခဲ့ဖူးမှာပါပဲ။ ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော်က အနော်ရထာ၊ ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော်က ဘုရင့်နောင်၊ တတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော်က အလောင်းဘုရား၊ နောက် ဗြိတိသျှနဲ့ဂျပန်လက် အောက်က လွတ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းကို စတုတ္ထ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ခေတ်သစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့သူလို့ ကျနော်တို့ အားလုံး သိနားလည်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ စတုတ္ထ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကို သူထူထောင်တယ် လို့ အထင် ရောက်နေအောင် ဘယ်လို အကြောင်းအချက်တွေက သူ့အတွက် စေ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့ ယူဆပါသလဲ ခင်ဗျ။ ဦးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ စစ်ရုံးမှာ ကျနော် တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ အချိန်အခါ တစ်ခုအတွင်းမှာတော့၊ ၀န်ကြီး တစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ပြန်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အမြင်ပေါ့လေ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ ဆိုတော့ “ဒီငတိ”သာ၊ ဒီ”ငတိ”ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဆိုလိုတာပါ။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ သူက အဲဒီစကား သုံးသလား။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို .. ဦးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ “ငတိ”ဆိုတဲ့ စကားသုံးတာပါ။ ဒီငတိသာ ဆက်ရှိနေလို့ရှိရင် အခု ငါလုပ်နေသလောက် သူ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ လေသံမျိုး ပြောခဲ့ဖူးတာကို ၀န်ကြီးတစ်ယောက် ဆီက တဆင့် ကျနော် ပြန်ပြီးတော့မှ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စကား မပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းပင်လျှင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပစ်ပယ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း လက်ထက်တုန်းက ကျနော်တို့ ငယ်စဉ်တစ်လျှောက်မှာ စစ်တပ်မှာကော အရပ်ဖက် ရုံးတွေမှာကော၊ ဒီလို အာဇာနည်နေ့တိုင်းမှာ သံဃာတော်တွေကို တပ်တိုင်းက ဆွမ်းကြွေးပြီးတော့ အမျှပေးဝေရတဲ့ အစဉ်အလာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါ တယ်။ ယနေ့ခေတ် ယနေ့အခါပေါ့ လေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ တက်လာပြီး ကတည်းက၊ အဲဒါတွေဟာ မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ နှုတ်မိန့်အရ အလိုလို ပျောက်သွားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံတွေကို ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ ထားတဲ့ စတိုခန်းတွေထဲမှာ ပစ်ထားတာ တွေ့ရလို့ နောက် ထပ်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရသူတစ်ဦးကတော့ ၁၉၉၀နှစ်တွေမှာ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်သင်တန်း တက်ခဲ့ပြီးတော့၊ မကြာသေးခင် နှစ်အနည်းငယ်ကမှ တပ်မတော်က ထွက်ခွါလာခဲ့သူ လူငယ်အရာရှိဟောင်း တစ်ဦးပါ။ သူဟာ အာ ဇာနည်ဗိမာန်ကိုလည်း နှစ်စဉ် သွားရောက် အလေးပြုနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင်တွေကိုလည်း ညီတိုးငြိမ်းဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မြန်မာ ဘလောဂ့် တစ်ချို့မှာ ရေးသားနေပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း ကျနော် ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ကိုညီတိုးငြိမ်း။ ။ ကျနော် တပ်ထဲ မ၀င်ခင်ကတည်းက ငယ်စဉ် ဘ၀ ကတည်းက ကျနော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အထ္ထုပတ္တိကို ဖတ်ရှု လေးစား အားကျခဲ့လို့ တပ်ထဲဝင်ခဲ့တာပါ။ တပ်မတော်ထဲ ရောက်တော့ စစ်တက္ကသိုလ်ကို ရောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တိမ်မြုပ်အောင် လုပ်နေတာ တွေ့ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျ။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဘယ်လိုများ တွေ့ရလို့ လဲခင်ဗျ၊ လက်တွေ့ နမူနာတစ်ခု ပြောပြပေးပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တိမ်မြုပ်အောင် လုပ်နေတာကို၊ လက်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဥပမာလေး တစ်ခု ပြောပြပါဦး။ ကိုညီတိုးငြိမ်း။ ။ ဥပမာ ကျနော်တို့ ဗိုလ်လောင်းအဆောင်တွေမှာ စတိုးခန်းကြီးတွေ ရှိတယ်ခင်ဗျ။ ဗိုလ်လောင်းပစ္စည်း အဟောင်း အမျဉ်းတွေ ထားတဲ့ စတိုးခန်းကြီးတွေမှာ၊ ပစ္စည်း အဟောင်းပုံတွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတွေ တွေ့ခဲ့တဲ့နေ့က စပြီး ကျနော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါ။ အမှန်တကယ်က ဒါတွေကို အထင်ကရ အဆောက်အအုံကြီးတွေလို နေရာမျိုးမှာ တခမ်းတနား ချိတ်ဆွဲထားသင့်တဲ့ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပုံကို ပစ္စည်း အဟောင်းပုံထဲမှာ တွေ့ရတဲ့အခါ၊ စပြီး ခံစားရတာပေါ့။ ကျနော်တို့ ခြေလျင်တပ်တွေမှာလည်း ချိတ်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလေ၊ ဘယ်သူမှလည်း မချိတ်ကြတော့ဘူး။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဗိုလ်ကြီး စစ်တက္ကသိုလ် တက်ခဲ့တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံဟာ စစ်တက္ကသိုလ်မှာ မချိတ်ရတော့ ဘူးဆိုတဲ့ အမိန့် ထုတ်ထားပြီးပြီလား ခင်ဗျ။ ကိုညီတိုးငြိမ်း။ ။ ဒီပုံကို ချိတ်ပါ ဆိုပြီးတော့ ပုံတစ်ပုံ အစားထိုးခိုင်းတော့ လက်ဟောင်းပုံကို ဖြုတ်ချရမယ် ဆိုတာကို အားလုံး သိကြတယ်လေ။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ဒါဆို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ တစ်ပုံမှ ဘယ်မှာမှ ချိတ်ဆွဲထားတာ မရှိတော့ဘူးလား ခင်ဗျ။ ကိုညီတိုးငြိမ်း။ ။ မတွေ့ဘူးခင်ဗျ၊ မတွေ့ဘူး၊ “အောင်ဆန်းခန်းမ”ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တောင်မှ ယိုယွင်း ပျက်စီးပြီးတော့ ရေညှိတက် စုတ် ပြတ်နေပြီ။ အလေးထား မထား ဆို တာ ဒါကိုကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။ ကြေးရုပ်တောင်မှ တူးဖယ်မရလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ အခုတော့ ရှိမရှိ မသိ ဘူး။ ကျနော်တို့တုန်းကတော့ ကြေးရုပ်ရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ အမြဲသွားပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်၊ တပ်မတော်ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်၊ ဘယ်သူမှ အလေးမပြုလျှင်နေ၊ ကျနော်တို့ကတော့ အလေးပြု မယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဘယ်တော့မှလည်း မေ့ပျောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ အခု ဗိုလ်ကြီး တပ်မတော်ကနေ ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို မှန်မှန် သွားပြီးတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အလေးပြုတယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။ ကိုညီတိုးငြိမ်း။ ။ အဓိက ကတော့ သားစဉ် မြေးဆက် ဂုဏ်ယူ လေးစား စံထားအပ်တဲ့ ကျနော်တို့ ဖခင်ကြီးရဲ့ သမိုင်း ကြောင်း မမေ့ ပျောက်စေချင်တာရယ်၊ သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ၊ သူ့ရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ် ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာတွေကို ကျနော်တို့ ခေတ်အဆက်ဆက် မျိုးဆက် သစ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ရယူနိုင်တဲ့ အစဉ်အလာတွေ ပေါ်အောင်၊ နောက်ပြီးတော့ အထိမ်းအမှတ် ဆိုတာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အခါမပြတ်လုပ် သင့်တယ်လေ။ ကျနော်က တပ်ထဲမှာတုန်းကတော့ အာဇာနည်ကုန်းကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူးပါဘူး။ ရန်ကုန်ဆိုတာကို မလာနိုင်ဘူးလေ။ မနှစ်က အာဇာနည်ကုန်းကို ကျနော် သွားအလေးပြုတယ်၊ မနက်ဖြန်လည်း ကျနော်သွားမှာပါ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပါ၊ သွားအလေး ပြုမယ်၊ ဖြစ်အောင်ပြု မယ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ တားဆီး ကန့်သတ်ပါစေ။ ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဒီကနေ့ ဗမာ့တပ်မတော်ထဲမှာ ဘယ်လိုပင် သေးသိမ် မှေးမှိန်အောင် အစီ အစဉ်ရှိရှိ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နေပေမယ့်လည်း ညီတိုးငြိမ်းလို လူငယ် တပ်မတော်သားတွေ မြန်မာ့တပ်မတော်ထဲမှာ အများအပြား ရှိနေသေးကြောင်း တင်ပြရင်းနဲ့ ဒီမှာတင်ပဲ ရပ်နားခွင့် ပြုပါခင်ဗျား။ ကျနော် ရော်နီညိမ်းပါ။http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6802&Itemid=1
ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) တနင်္ဂနွေ, 18 ဇူလိုင် 2010မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ထပ်ဟပ်မှု မရှိတာကြောင့် ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေကို ဗြိတိသျှအစိုးရ အနေနဲ့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို ၂ ရက်ကြာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အငယ်တန်းဝန်ကြီး ဂျရယ်မီ ဘရောင်း (Jeremy Browne) က ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ် ပီရွန်း (Kasit Piromya) နဲ့ တွေ့ဆုံအပြီး ဘန်ကောက်မှာ သတင်းထောက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ပြောသွားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော် ရှိနေတာကြောင့် ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့တော့ အဓိပ္ပာယ် ပြည့်ဝတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတရပ် ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ သူက ထောက်ပြပါတယ်။ ဗြိတိသျှအစိုးရ အနေနဲ့ကတော့ မြန်မာအစိုးရဘက်ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အပေါ်မှာ စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ မစ္စတာ ဂျရယ်မီ ဘရောင်းက ပြောသွားပါတယ်။“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလုပ်တော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အများပြည်သူလူထု အမြင်ကို ထင်ဟပ်တဲ့ တရားဝင် ဖော်ပြချက်တရပ်လို့ ကျနော်တို့ မမြင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလက်ရှိ အခြေအနေကို လက်ခံလို့ မရဘူးလို့ ကျနော်တို့မှာ ခိုင်မာတဲ့အမြင် ရှိထားပါတယ်။”မစ္စတာဘရောင်းဟာ အခုလအတွင်းမှာပဲ ဗြိတိသျှ ပါလီမန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ အယုံအကြည် မရှိတဲ့သဘော ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံနေရသရွေ့ အခု ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှု ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဗြိတိသျှ ပါလီမန်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာက အထူးစိုးရိမ်လာနေတဲ့ မြန်မာ၊ မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယား ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စိုးရိမ်ကြောင်း မစ္စတာဘရောင်းက သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။“ဒါဟာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုပါပဲ။ အခုလို ပုံစံမျိုးနဲ့ နျူကလီးယားလက်နက် ပြန့်ပွားတာ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြင်းထန်တဲ့ သဘောထား ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာ ဒီကိစ္စကို အပြင်းထန်ဆုံး ကန့်ကွက် ပြောဆိုသွားမှာပါ။”ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နျူကလီးယားနဲ့ ဒုံးလက်နက်ဆိုင်ရာ ပြင်ပ အဆက်အဆံ မလုပ်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြောက်ကိုရီးယားဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နျူကလီးယားနဲ့ ဒုံးလက်နက်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တွေမှာ ပတ်သက်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲချက်တွေ ပေါ်ခဲ့ပြီး ဒီကိစ္စ မှန်ခဲ့ရင် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်တာပဲ ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာက ပြစ်တင် ဝေဖန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားဝင် နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းမှုမျိုးတော့ မရှိသေးပါဘူး။http://www1.voanews.com/burmese/news/myanmar-uk-98717999.html
အဖြေမရသေးသော မေးခွန်းများ ဧရာဝတီ Monday, July 19, 2010 အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူ သတ်သလဲ စာအုပ် ရေးသားသူ ဦးခင်အောင်နှင့် အင်တာဗျူးWho Killed Aung San? စာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုသူ ဦးခင်အောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး ကော်မတီ (သြစတြေးလျ) တွင် ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၂ အထိ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်နှင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ တွင် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်း အစိုးရ၏ သြစတြေးလျဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်သည်။ဦးခင်အောင်၏ ဖခင်မှာ ဗိုလ်ချုပ် (ရဲချုပ်) ဦးထွန်းလှအောင်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်များ လုပ်ကြံခံရစဉ်က ဘုရင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် မှုခင်း စုံစမ်းရေးဌာန၏ ဒုရဲချုပ်ဖြစ်သည်။ ဦးစောနှင့် အပေါင်းအပါများကို လျင်မြန်စွာ ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ ဦးခင်အောင်သည် ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်နှင့် ဗမာ့ ရေတပ်မတော်တို့တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ စစ်ပြီးခေတ်တွင် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကုမ္ပဏီတခု၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် ၁၂ နှစ်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကင်ဘာရာမြို့တွင် ၁၉၈၃ မှစ၍ အခြေချ နေထိုင်သည်။ဦးခင်အောင်သည် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်များ လုပ်ကြံခံရမှုကြီးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတချို့နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့် လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတို့ လုပ်ကြံခံရချိန်တွင် ဦးခင်အောင်သည် အတွင်းဝန်ရုံးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တဖက်ကမ်းရှိ ရေတပ် ကမ်းနားဌာနချုပ် ပြုလုပ်ထားသော စိန့်ပေါလ်ကျောင်းဝင်းတွင် ရေတပ်အရာရှိတဦးအဖြစ် တာဝန်ကျနေသည်။ ဗြိတိသျှ မော်ကွန်းတိုက်ရှိ အထောက်အထားများနှင့် စာအုပ်စာတမ်းများကို လေ့လာ၍ Who Killed Aung San? စာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ လုပ်ကြံမှုဖြစ်ပွားစဉ်က ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ဘေးတွင် ကပ်ထိုင်နေခဲ့ပြီး ကျည်ဆန် ချော်ထွက်သွားသောကြောင့် အသက်မသေခဲ့သည့် ဦးခင်အောင်၏ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးရွှေဘော်ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြောပြခဲ့ခြင်းက ဤ စာအုပ်ရေးသားရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်ဟု စာအုပ်အမှာတွင် ရေးသားထားသည်။ သြစတြေးလျတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ဦးခင်အောင်ကို ဧရာဝတီ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကျော်စွာမိုးက မေးမြန်းထားပါသည်။မေး ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်ဖြတ်တဲ့ နေရာမှာ ဘာကြောင့် ဗြိတိသျှက အဓိက ပါနေတယ်လို့ သုံးသပ်ရပါသလဲ။ဖြေ ။ ။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းက လွတ်လပ်ရေး လိုချင်တယ်။ နိုင်ငံ ကြီးပွားစေချင်တယ်။ ဆိုတော့ ရှိတဲ့ တောင်ပေါ်သားတွေနဲ့ အကုန်လုံး ပေါင်းရမယ်လေ။ အဲဒီလိုမျိုး စိတ်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဝန်ကြီးတွေကို သတ်ဖို့အထိကတော့ အသေအချာ ဘာမှ မရှိဘူး။ နောက်ကျတော့ ဘင်ဂလေ [John Stewart Bingley: ဗြိတိသျှကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်] နဲ့ တခြား ဗြိတိသျှ ခေါင်းဆောင်တွေ ပါလာတယ်။ အင်္ဂလိပ် ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်း သူတို့ မြန်မာပြည်မှာ ဆက်နေဖို့ အရေးကြီးတယ်။ လွတ်လပ်ရေး မရဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဆိုရှယ်လစ်ဇင်ကို သဘောကျသလို ပြောလာတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေကို နေရှင်နယ်လိုက်ဇ် (နိုင်ငံပိုင်) လုပ်မယ်၊ မြန်မာအကျိုးရှိရင် ဘာမဆို အကုန်လုံး လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဗြိတိသျှတွေက ပြောလာတယ်။မေး ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တတိုင်းတပြည်လုံးကို စုစည်းနိုင်တဲ့ လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ လက်ဝဲယိမ်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ အဲဒီ အချက်နှစ်ချက်က တော်တော် အဓိကကျနေတယ်ပေါ့။ တခြားအချက်တွေရော ရှိသေးလား။ဖြေ ။ ။ အင်္ဂလိပ် ကုမ္ပဏီကြီးတွေက လုပ်ကြံမှု နောက်ကွယ်မှာ ငွေနဲ့ ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကို မလိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထောက်ပံ့နိုင်တာပေါ့ဗျာ။ တခြားနည်းမရှိဘူး။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပထမ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီ (Winston Churchill)၊ နောက် အက်တလီ (Clement Atlee)၊ သူတို့ အနေနဲ့ကလည်း ဒီလောက်မပေးဘူး။ အစိုးရအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပေးဘူး။ တိတ်တိတ်ခိုးပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပေးနိုင်တာက အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီတွေပဲ။ ဦးစောကို ပိုက်ဆံပေးတာတော့ ပေးမှာပဲ။ ဦးစောကလည်း တောင်းမှာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးစောရဲ့ညီ မောင်မောင်ကြီးကလည်း လန်ဒန်မှာရှိတယ်။ နောက်တဆင့်ကျတော့ ဘလက်မားကက် (မှောင်ခိုဈေးကွက်) ဆိုတာ စစ်ပြီးခေတ်မှာ ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီအချိန်မှာ တပ်ထဲရောက်နေပြီ။ ရေတပ်ထဲမှာ။ တပ်ထဲရောက်နေတော့ ဒီအကြောင်းတွေ ကောင်းကောင်း သိတယ်။ ကုန်ကူးနိုင်တဲ့ လူတွေကလည်း တွေ့ကရာ ကုန်ကူးတာ။ နည်းနည်း မှတ်သားစရာနဲ့ ရယ်စရာလေးပေါ့ဗျာ။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်မှာ ပါတဲ့ ဗိုလ်စင်္ကြာက လေကြောင်း ကုမ္ပဏီလေးတခု သူထောင်တယ်။ အခု အာဏာရနေတဲ့လူတွေလည်း ဘိန်းတွေဘာတွေချ၊ ကျောက်စိမ်းသွင်းရင်သွင်း အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာလိုပဲ၊ အဲဒီ ခေတ်ကလူတွေကလည်း မီးခြစ်ကျောက်တွေ သွင်းတာ။ ကျနော်ပြောချင်တာက တွေ့ကရာ လုပ်ကြတာ။ အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တွေက ဘာလုပ်လဲဆို သူတို့ရဲ့ လက်နက်တွေ စင်ကာပူကို ပြောင်းနေရတယ်။ မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေး ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ စင်ကာပူကို ပြောင်းနေရတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သူတို့က ရောင်းစားတယ်ဗျာ။ မရှင်းဂန်း၊ တော်မီဂန်းတွေ။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ လက်နက်တွေ အမျိုးမျိုး ရောင်းစားတော့ သူတို့ဆီကနေ ဦးစောက ဝယ်တယ်ဗျာ။မေး ။ ။ ဗိုလ်မှူး စီ ဟင်နရီ ရန်း [Maj. C. Henry Young: အိန္ဒိယတပ်မတော် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ရုံ တပ်ခွဲ၏ တပ်မှူး] တို့ ဗိုလ်မှူး လန့်စ်လော့ ဒိန်း [Maj. Peter Lancelot Daine: မင်္ဂလာဒုံ ပင်မ ခဲယမ်းမီးကျောက်တိုက်၏ တပ်မှူး] တို့က ရိုင်ဖယ်တွေ၊ ပစ္စတိုတွေနဲ့ ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ အဓိကထောက်ပံ့တဲ့ ဗြိတိသျှအရာရှိတွေလား။ တချို့ကပြောတော့ လန့်စ်လော့ ဒိန်းက တကယ် လက်နက်ထောက်ပံ့သူ မဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်မှူး ရန်း ဆီကပဲ ဦးစောက လက်နက်တချို့ ရလိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ဖြေ ။ ။ ပုလိပ်က ကျနော့်အဖေရဲ့ စီအိုင်ဒီဌာနက ကြားတာလား မသိဘူး။ စီအိုင်ဒီက ဌာနကလည်း စစ်အတွင်းက အလုပ်လုပ်လာတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ ချဲ့နေပြီ။ သူတို့ကလည်း ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတော့ အမျိုးမျိုး ထောက်လှမ်းကြတာပေါ့။ နောက်တော့ အဲဒီမှာ လက်နက်တွေ ပျောက်ပျောက်နေတာ ပေါ်လာတယ်။ ဦးနု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ အပြင် ဗိုလ်ချုပ်ကရော ဘုရင်ခံဆီ သွားသွား တိုင်ကြတယ်ခင်ဗျ။ ဘုရင်ခံကလည်း ဘာမှ မလုပ်ဘူး။မေး ။ ။ သွားတိုင်တယ်ဆိုတာက လက်နက်တွေ ပျောက်ပျောက်နေတယ်၊ ဦးစောက လက်ခံရယူနေတယ် ဆိုတာ သိပြီးမှ သွားတိုင်တာလား။ဖြေ ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ကျနော့် အဖေရဲ့ စီအိုင်ဒီဌာနက သတင်းပေးတာ။ ကျနော့် အဖေ ဌာနက လူတွေက မျိုးစုံရှိတယ်။ ဦးစောကို ဖမ်းမယ့် အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့  အိမ်တွေမှာ လူတွေ ချောင်းနေတယ်။ လက်နက်တွေ ပျောက်တာတို့ဘာတို့ အကြီးအကျယ် သိလာတဲ့အခါကျတော ဦးနုတို့က ဦးကျော်ငြိမ်းတို့က တခုခုတော့ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သိတယ်။ သတင်းတွေက အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေတယ်။မေး ။ ။ ဗိုလ်မှူး ရန်း ကနေ ထောက်ပံ့တဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ တကယ် ဗိုလ်ချုပ်ကို သတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ သူတို့ သတ်ခဲ့တာက တခြားလက်နက်တွေလို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ဖြေ ။ ။ အဲဒီ လူသတ်သမားက ၄ ယောက်ပဲ။ အဲဒီတော့ လေးယောက်ထဲမှာ တော်မီဂန်းနဲ့က ၃ ယောက်။ တယောက်က စတင်းဂန်းနဲ့။ အငယ်ဆုံးလူ ခင်မောင်ရင် က စတင်းဂန်းကိုင်တယ်။ နောက်ကျတော့ လက်နက်တွေကို ကုလားပြည်ယူသွားပြီး သူတို့စစ်တာပဲဗျ။ အမျိုးမျိုး စစ်တာပဲ။မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဘာတွေတွေ့ခဲ့ရသလဲ။ဖြေ ။ ။ ဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ စစ်တပ်ရဲ့  လက်နက်တွေဗျ။ အသေအချာ ဘယ်သူ ရောင်းသလဲ၊ ဘယ်ဝါ ရောင်းသလဲ။ နောက်ကျတော့ သူတို့ကို တိတ်တိတ်ခိုးပြီး သူတို့နိုင်ငံကို ပြန်လွှတ်လိုက်တာပေါ့။ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတုန်းကတော့ ဗီဗီယန်း [Captain David Vivian: မြန်မာ လက်နက်ကိုင် ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ လက်နက်အကြံပေး] ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ အဖမ်း မခံရဘူး။ ဗီဗီယန်းက အဖမ်းခံရရုံတင် မကဘူး၊ လျှောက်ပြီးတော့ ဘာလုပ်တယ်တို့၊ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ လူဆီ သွားပါတို့ အပြင်ကို မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ပို့တယ်။ အဲဒီ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့လူက ဘင်ဂလေ။ ဗြိတိသျှကောင်စီက ဘင်ဂလေ။ တော်တော်တော့ ရှုပ်တဲ့ ရာဇဝင်။မေး ။ ။ ဗြိတိသျှ ခေါင်းဆောင် ချာချီတို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တခြား မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်လို သဘောထားရှိလဲ ခင်ဗျ။ဖြေ ။ ။ ပထမ ချာချီက တောက်လျှောက် စစ်အတွင်းမှာ အုပ်စိုးမိတာကိုး။ ပထမဆုံး ချိန်ဘာလိန် (Neville Chamberlain) က ဝန်ကြီးချုပ်။ အဲဒီ ဝန်ကြီးချုပ်က နာဇီ ဟစ်တလာကိုသွားပြီး လျှော့လျှော့ပေးနေတာ။ စစ်မဖြစ်ချင်ဘူး။ သူတို့က ရှုံးမှာကြောက်နေတာ။ ဂျာမနီကလည်း တော်တော် အားကောင်းနေတာ။ အဲတော့ ချိန်ဘာလိန်က လျှော့လျှော့ပေးနေတဲ့ အခါမှာ ချာချီကတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေက သူ့ကို မြှောက်စားလိုက်တော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ သူက ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ နိုင်နိုင်နင်းနင်း လုပ်လိုက်တာ သူတို့ စစ်နိုင်သွားတာပဲ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် တုန်းက ချာချီက ဝန်ကြီးချုပ်ပဲလေ။ စစ်ပြီးကာလ ရောက်လာတော့ အက်တလီတို့ဘက်က ဆိုရှယ်လစ် ပေါ့လေ။ ချာချီက ရီပတ်ဗလစ်။ အက်တလီလူတွေက တက်လာပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ချာချီက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ရေး မပေးဘူး။ Commonwealth (ဓနသဟာယ) ကျတော့မှ ဦးစောက သွားပြီတော့ ချာချီကို တောင်းပန်တယ် မဟုတ်လား။ Commonwealth ပေးလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ ထောက်ခံပါ့မယ် ဆိုတော့ ဂရုတောင်မစိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တို့စစ်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ တို့နဲ့ တိုင်ပင်ပေါ့တဲ့ လာတောင်းပေါ့၊ တောင်းရင် တို့ကြည့်မယ်တဲ့။ စစ်ပြီးတဲ့အခါကျမှ သူက ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးသွားတယ်။ ရှုံးသွားတဲ့အခါမှာ အက်တလီက တက်လာတော့ ဗြိသျှအင်ပါယာကြီး ခွဲပြဲပြီးတော့ သူက လက်လွှတ်ပစ်တာပဲ။ အင်္ဂလန်ကလည်း မနိုင်တော့ဘူးလေ။ အင်္ဂလန်က နိုင်တာကတော့ စစ်တော့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံကို ဆက်ပြီးတော့ အုပ်စိုးဖို့ မတတ်နိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဗမာပြည်ဟာ ချာချီ ဆက်နေလို့ရှိရင် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ လွတ်လပ်ရေးမရတော့ဘူး။မေး ။ ။ ဦးစော ကျတော့ရော။ဖြေ ။ ။ ဦးစောက သက်သက် တကိုယ်ကောင်းဗျ။ ပညာလည်း မရှိဘူး။ သူက ရာထူးတွေဘာတွေ ရနေတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ထီထိုးပြီး အမျိုးမျိုး တက်လာကြတယ်။ အဲဒါကို တချို့ အင်္ဂလိပ်တွေက သဘောကျပြီးတော့ အသုံးပြုတဲ့ အပိုင်းလည်း ပါလိမ့်မယ်။မေး ။ ။ သူက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အောင်ဆန်း အက်တလီ စာချုပ်ချုပ်ဖို့ လန်ဒန်ကိုသွားတယ်။ သူပါသွားတော့ လက်မှတ်မထိုးဘူးဆိုတာက အဓိကကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကို မနာလိုတဲ့သဘောလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် မူအရ လက်မခံတဲ့ သဘောလား။ဖြေ ။ ။ စာချုပ်ဆိုတာဗျာ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဘာစာချုပ်ဖြစ်ဖြစ် အမျိုးစုံရှိတယ် မဟုတ်လား။ အပိုဒ်တွေ မျိုးစုံရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အပြစ်ရှာချင်ရင်၊ မလုပ်ချင်ရင် အလွယ်တကူ နောက်ဆုတ်သွားလို့ ရတာပဲဆိုတော့ သူက အောင်ဆန်း-အက်တလီ သဘောတူညီချက်တွေကို ဟိုဟာ မကြိုက်ဘူး၊ ဒီဟာမကြိုက်ဘူး အပြစ်ရှာပြီးတော့ နောက်ဆုတ်တာပဲ။ သခင်ဗစိန်လည်း ပါနေတာပဲ။ တချိန်လုံး သခင်ဗစိန်ရယ်၊ သခင်ထွန်းအုပ်ရယ်။ သခင်ထွန်းအုပ်က ဗိုလ်ချုပ်က မော်လမြိုင်မှာ သူကြီးကို သတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင် ဒုက္ခဖြစ်အောင် ထောင်ကျအောင် လုပ်သေးတယ်မဟုတ်လား။မေး ။ ။ ချာချီက ဗိုလ်ချုပ်အသတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တခုခုပြောတယ်။ အဲဒါကို မှတ်မိမလား မသိဘူး။ဖြေ ။ ။ သူက အောင်ဆန်း၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်နဲ့ သခင်တွေက တို့ကို ပုန်ကန်ထားတဲ့လူတွေ။ အဲဒီလူတွေကို ဘာဖြစ်လို့ အဆက်သွယ်လုပ်ရမှာလဲ၊ ဘာလို့ အကူညီပေးရမှာလဲ၊ အဲဒီလို ပြောတာ။ သူတို့က House of Common (အောက်လွှတ်တော်) မှာ Debate အမြဲရှိနေတာကိုး။ ရှိနေတော့ စစ်ပြီးတဲ့ အခါကျရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ၊ ဘယ်လို စီစဉ်ကြမှာလဲပေါ့လေ။ လောဒ့် မောင့်ဘက်တန် [Lord Mountbatten: အိန္ဒိယ ဘုရင်ခံချုပ်] မပါလို့ရှိရင် ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ချာချီ ပြောတာက ပုန်ကန်ထကြွထားတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ဘာမှ ကူညီစရာမလိုဘူးလို့ ပြောတာပေါ့နော်။ ကုလားပြည် စဉ်းစားမယ်၊ မြန်မာပြည် စဉ်းစားမယ် ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့လေ။ စစ်အပြီးမှာဆိုတော့ Debate ထဲမှာ ပါလာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မောင့်ဘက်တန်ကတော့ မြန်မာပြည်ဘက်မှာ တော်တော် ကူညီလိုက်တယ်။ သူကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတောင်မှ နိုင်ငံရေးသမား ဆက်ပြီးလုပ်ချင်ရင် စစ်ရေးက ထွက်ရမယ်၊ စစ်ဗိုလ်လုပ်လို့ မရဘူးလို့ အကြံပေးတာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်က အဲဒီမှာ ထွက်သွားတာ။မေး ။ ။ တကယ်လို့များ ဗုိုလ်ချုပ်တို့သာ လုပ်ကြံ မခံရဘူး၊ အသတ်မခံရဘူးဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်လို့ ထင်သလဲ။ဖြေ ။ ။ အများကြီး ပိုကောင်းမှာပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကတော့ ပြောတာပဲ။ သူ ဘုရားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် အများကြီး ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဗျ။ ဦးနုတယောက်ပဲ သူ့ကို နားထောင်မယ့်သူ ရှိမယ်။ ဦးကျော်ငြိမ်း။ သခင်သန်းထွန်း၊ ဦးဗဆွေတို့ကို ထိန်းရမယ်။ သခင်စိုးကိုလည်း ထိန်းရမယ်။မေး ။ ။ သူနဲ့ အတိုက်အခံဖြစ်တဲ့ လူတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်က ဖြစ်ပါ့မလား။ ဖြေ ။ ။ သူ့ကို လေးစားတဲ့ စစ်တပ်ရှိတယ်လေ။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ရေတပ်။ ရေတပ်က နည်းနည်းလေးရယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်း လေ့ကျင့်ထားတယ်။ စည်းကမ်း သေဝပ်တယ်၊ လူတော်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ လေတပ်မှာလည်း ပညာတတ်တွေရှိတယ်။ လေတပ်နဲ့ ရေတပ်လိုဟာမျိုးက သူ့ကို ထောက်ခံတယ်။ ဒါကို ကျနော် ကိုယ်တိုင် ပြောနိုင်တယ်။ ကျနော်တို့လူတွေလည်း အကုန်သိတာပဲ။ ကွန်မြူနစ်တွေက စစ်တပ်ထဲက လူတွေကို မွေးနေပြီ။ အဲဒီ အချိန်မှာ မွေးလို့မရတဲ့လူတွေကတော့ ရေတပ်နဲ့ လေတပ်တို့ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီလူတွေကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ထောက်ခံမှာပဲ။ စစ်တပ်ထဲမှာလည်း တော်တော်များများ ရှိလိမ့်မယ်။ ကရင်ရှိတယ်၊ ကချင်ရှိတယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ထောက်ခံနေပြီ။မေး ။ ။ အခု ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့ သူ့သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုကွာတယ်လို့ ထင်သလဲ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ။ဖြေ ။ ။ သူ့သမီးကိုကတော့ ကံအားလျော်စွာ သူ့အမေ နေမကောင်းလို့ ပြန်ရောက်လာတယ်။ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ သူ့အချိန်နဲ့ သူ့အခါနဲ့။ သူ့အမေကြီး ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ သူက ခေါင်းဆောင်လုပ်လိုက်တာ။ ရုပ်ရည်ကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်။သူ့ဘောထားကလည်း ကောင်းတယ်။ သူပြောတာတွေလည်း ကောင်းတယ်။ လူတွေကလည်း သဘောကျတယ်။ ပညာလည်း ရှိတယ်။ အဲလိုလူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာ တခြား ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဗျာ။ အဲဒီ လူတွေထဲမှာ လူတော်လို့ ပြောရမယ်။ ပညာရှိလို့ ခေါ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/interview/4-interview/3663-2010-07-19-12-23-48
BSDO 2010 July Committee Toronto Canada Summary only...
နအဖ ထုတ်ပြန်သော ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအပေါ်သုံးသပ်ချက် (နိဂုံး)(၁၇- ၇- ၂၀၁၀)http://cpburma.org/Articles/onelectionlaw2.pdf On Election Law2Summary only...
အတွေးခေါင်နေမလားတော့မသိပါ။ သတိဆိုတာ ပိုသည်မရှိ လိုသည်ချည်းပါ။ အာဇာနည်နေ့ အခါသမယမှာ ကောလဟဠအဖြစ် အွန်လိုင်းတွေမှာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သတင်းတွေကို အခြေခံတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ဒေါ်စုကို ပြန်လွှတ်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟဠဖြစ်နေတာ သီတင်းပတ်တွေ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုတော့ အာဇာနည်နေ့မှာ လွတ်မယ်လို့ အတိအကျ အွန်လိုင်းတွေမှာ တွေ့လာရပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေ စကြားစဉ်ကတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ တမင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားချင်လို့ ယက်ထောနဲ့ အမှုဆင်ထောင်ချခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ ဒေါ်စုကို လွှတ်ပေးရင်တောင်မှ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှသာ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆခဲ့တာပါ။အခုတော့ အဲဒီစဉ်းစားချက်တွေကို အလေးအနက် ပြန်လည်သုံးသပ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ လွှတ်ပေးရင်လည်း အကောင်းထက် အဆိုးကပိုများနေမလား စဉ်းစားမိလာပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်ပျက်တွေများ ဖြစ်လာလေဦးမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်မိပါတယ်။အကြောင်းကတော့ စစ်အုပ်စုရဲ့ ပညာရေးဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးချုပ်အောင်မျိုးမြင့်က ဒီလခြောက်ရက်နေ့က မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရတနာပုံနယ်မြေမှာ ဆရာဆရာမတွေ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကြံ့ဖွတ်အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရတာ သူတို့အတွက် တာဝန်ကြီးကြောင်း၊ တစုံတဦးက ဒေါ်စုကို စနိုက်ပါနဲ့ ချောင်းမြောင်းလုပ်ကြံခဲ့ရင် အများက သူတို့ (နအဖ) ကိုပဲ ရိုးစွပ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်ထောက်လှန်းရေး စီအိုင်အေကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ မေးခွန်းထုတ်သွားတယ် ဆိုပါတယ်။ ဒီစကားကို သူရောက်လေရာ တွေ့ဆုံသူတိုင်းကို ပြောတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ အကြံအစည်အတွက်၊ ကြိုတင်လမ်းခင်းမှုလား၊ သို့တည်းမဟုတ် သူတို့ရဲ့ အကြံအစည် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်တွေအတွက် တီးခေါက်ကြည့်တဲ့သဘော (searching- fire) လား စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စုအတွက် ပိုပြီးစိုးရိမ်မိစေတဲ့ အချက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ သံဃာ့အရေးခင်း မတိုင်မှီက တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပြည်တွင်း မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ ပြောပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ ဒေါ်စုကို ထပ်လုပ်ကြံဘို့ ကြံစည်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေက ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်စုရှိနေတာကို လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး၊ လက်မခံနိုင်ပါဘူး၊ မရှိစေချင်ပါဘူး။ သူတို့လုပ်သမျှ မအောင်မြင်တာ ဒေါ်စုကြောင့်၊ သူတို့ကို လူထုမထောက်ခံတာ ဒေါ်စုကြောင့်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်စုကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရမယ်၊ ဒေါ်စုမရှိရင် ဗမာပြည်မှာ သူတို့လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ရတယ်လို့ ယူဆတယ်ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုဟာ သာမာန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ အလွယ်တကူ သုတ်သင်ဘို့ မဖြစ်နိုင်လို့ ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို၊ သမ္မတကနေဒီလုပ်ကြံမှု ပုံစံလို ပြဇာတ်ဆန်ဆန် လုပ်ကြံဘို့ ကြံစည်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သူတို့အကြံအစည်ကတော့ လက်ရွေးစင် လူတစု သို့မဟုတ် တဦးက ဒေါ်စုကို လုပ်ကြံမယ်။ အဲဒီလူကို နောက်တစုက ထပ်ပြီး သုတ်သင်မယ် (အဓိကတရားခံ prime suspect or hard evident ကို ဖျောက်ဖျက်တဲ့သဘော)။ နောက် အဲဒီလုပ်ကြံမှုမှာ ဒုတိယအဆင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူကို ရုံးတင်စစ်ဆေး အပြစ်ပေးမယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်စုကို နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ သင်္ဂြီုလ်မယ်၊ ဒေါ်စုအတွက် အမှတ်တရ ကျောက်ရုပ်တခုထုလုပ် ဂုဏ်ပြုပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ဗမာပြည်သူတွေကို မျက်လှည့်ပြပြီး လုပ်ကြံမှုက ရှောင်ထွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒေါ်စုကို အပျောက်ရှင်းပြီး သူတို့ရဲ့ ခြေရာလက်ရာကို အစဖျောက်ဘို့ အကြံအစည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတုန်းကတော့ ကျွန်တော့မိတ်ဆွေကို ဒါဟာ သိပ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းတယ်လို့ ပြောမိခဲ့ပါတယ်။ သူကလည်း ဘာမှပြန်မပြောတော့ သူလည်း ဒီအကြောင်း ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ သဘောထားခဲ့ဟန် တူပါတယ်။ အခုတော့ နောက်ထပ်သိလာရတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဒီအရေး (စစ်အုပ်စုရဲ့ လျှို့ဝှက်အကြံနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ လုံခြုံရေး) ဟာ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားရမယ့် အခြေအနေ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွေ ဝိုင်းဝန်းရှာဖွေရမယ့် အခြေအနေတွေ ရှိနေပါပြီ။ဟိုအရင်ကတော့ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုဟာ ဒေါ်စုကို ခြောက်လှန့်ရုံသက်သက် (သို့) ဒေါ်စုနှင့် လူထုကို ခွဲခြားဖို့သက်သက်ပဲလား၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ အထိ ကြံစည်ခဲ့တာလားဆိုတာ သိပ်မကွဲပြား မသေခြာခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုဟာ ဒေါ်စုကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ ဦးတင်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပြန်လည်ပြောပြချက်တွေနဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့ ထောက်လှန်းရေးဟောင်း ဗိုလ်အောင်လင်းထွဋ် ထုတ်ဖော်ဝန်ခံချက်တွေက အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဦးတင်ဦးရဲ့ ပြန်လည်ပြောပြချက်တွေထဲမှာ တိုက်ခိုက်သူတွေ ( အရပ်ဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေ) ဟာ ဒေါ်စုရဲ့ကားကို အဓိက ဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံနဲ့ ဒေါ်စုကို ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ ပါတီဝင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေက အသက်ပေးကာကွယ်ခဲ့လို့ လွတ်မြောက်သွားရပုံတွေကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွဋ်ကလည်း သူရဲ့စာတပိုဒ်ထဲမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့်က ဒီပဲယင်းအဖြစ်အပျက်တွေကို ဗိုလ်သန်းရွှေထံ သွားသတင်းပို့တော့ သန်းရွှေက “ အေး ငါသိတယ်၊ အဲဒါ ငါလုပ်ထားတာ မင်းဘာသာမင်း ကြည့်ရှင်းလိုက်” လို့ ပြန်ပြောတယ်လို့ ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှုဆိုတာ တိုင်းပြည်တပြည် လူမျိုးတမျိုးရဲ့ အပေါ်ယံလွှာ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေထဲမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အမူအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ဖောက်ပြန်တဲ့ လက္ခဏာရှိပါတယ်။ အောက်လွှာ အခြေခံလူတန်းစားနဲ့ ဆက်နွယ်မှု နည်းပါတယ်။ ဆက်နွယ်မှု ရှိလာပြီဆိုရင်လည်း အောက်ခြေလူထုအာဏာကို စုစည်းဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး လူထုအာဏာကို မြှင့်တင်ဘို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ အဆုံးသတ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာ့သမိုင်းစဉ် တလျှောက်မှာ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှုနဲ့ ကင်းလွတ်တဲ့နိုင်ငံရယ်လို့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အဲဒီထဲမှာ ဗမာပြည်လည်း အဝင်အပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တိုက်ဆိုင်မှု တခုကတော့ အင်္ဂလန် လစ်ဘရယ်နိုင်ငံရေးပုံစံ ထူထောင်ခဲ့ကြတဲ့ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စတဲ့ ကိုလိုနီ နိုင်ငံဟောင်းတွေမှာလည်း နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချက်ပါ။ ဗမာပြည်ကတော့ လွတ်လတ်ရေး သန္ဓေတည်စမှာပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ ပိုပြီးလည်း ပက်စက်ပါတယ်။ လုပ်ကြံမှုမှာ ခေါင်းဆောင်အများစု ဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ ပန်းကောင်းအညွန့်ကျိုး၊ တာမထွက်ခင် မြင်းကောင်းခွာလိပ်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ လက်ရှိဗမာလူထု ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခသုက္ခအပေါင်းနဲ့ စစ်အာစဏာရှင်စံနစ်ဟာ ဒီနိုင်ရေး လုပ်ကြံမှုရဲ့ အကျိုးဆက်လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။လက်ခံနိုင်စရာမဟုတ်ပေမဲ့ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်စတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုတွေက တစုံတရာသော အတွေးအခေါ် အယူအဆ တခုသော လူအုပ်စု ရည်ရွယ်ချက်တခုခုအတွက် ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဗမာပြည် ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လုပ်ကြံခံလိုက်ရတဲ့ လုပ်ကြံမှုကတော့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့စံနစ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဓနရှင်တစုက အရင်းခံအကြောင်းလို့ ဆိုသော်လည်း ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်သူကတော့ ဗမာတယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အာဃာတ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလောဘဆန္ဒကြောင့် ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ အင်မတန်ကျဉ်းမြောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် တဖက်က တွေးကြည့်ရင် အမျိုးသားရေး ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့မှု တခုဖြစ်ပါတယ်။အဆက်ဆက်သော စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဖောက်ပြန်မှု ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ အမျိုးသားရေး ဂုဏ်သိက္ခာကို တရစ်ပြီးတရစ်ချခဲ့တယ်။အမြင်မတူတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဘက်၊ ကျောင်းသားပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး ရိုင်းစိုင်းရက်စက်မှုကို ပြခဲ့တယ်။ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို သတ်၊ ဘုရားကျောင်းကန်တွေ ဖျက်ဆီးပြီး အာဏာလောဘနဲ့ သူရဲဘောင်ကြောင်မှုကို ပြခဲ့တယ်။နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဒုက္ခသည်တွေအပေါ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်ပြီး လူမဆန်တဲ့ ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာမှုကို ပြခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေး ကတိအမျိုးမျိုးပေးပြီး ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားနဲ့ အရှက်သိက္ခာမဲ့မှု ယုတ်မာပက်စက်မှုကို ပြခဲ့တယ်။အခုလည်း အမျိုးသားရေး ဂုဏ်သိက္ခာပျက်စေမဲ့၊ အမျိုးသားရေး ဆုံးရှုံးမှုကြီးကို ဖြစ်စေမဲ့ ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ အကြံအစည်တခုကို အားထုတ်နေပြန်ပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ အခုလို အာဇာနည်နေ့ အခါသမယမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းနဲ့ အာဇာနည်ကြီးတွေရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ချီးမွမ်းခြင်း ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ ယုတ်မာတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချခြင်းတွေ လျှော့ပါးပြီး ဂဠုန်စောရဲ့ အစွမ်းအစနဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဂုဏ်ဖော်သလို ပြည်တွင်းစာစောင်တွေမှာ ဖော်ပြနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ နောင်ဖြစ်ပေါ်လာစရာရှိတဲ့ ဂဠုန်စောလို လုပ်ရပ်တခုအတွက် ကြိုတင် လမ်းခင်းနေတာများလား စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုဟာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ အခုထိ မပြီးဆုံးသေးပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အားထုတ်ပံ့ပိုးမှု လိုအပ်နေဆဲဆိုတာကို ပြသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကိုလည်း ဝေဘန်စရာတွေ ရှိကောင်းရှိမှာပါ။သို့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်အားကိုးမှုကို ခံယူရရှိထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လူထုရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးခါးသီးသီး ကွဲလွဲနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် အုပ်စုနဲ့ ပြည်သူလူထု အကြားက ပဋိပက္ခရဲ့ အဖြေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆုံးရှုံးစေမှုဟာ ဗမာပြည်သူတွေအတွက် အမျိုးသားရေး ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သိက္ခာပျက်သုဉ်းမှုဖြစ်စေသလို၊နိုင်ငံတကာမိသားစုအတွက်လည်း အမှန်တရား ဆိုင်ရာရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဗမာသာမက နိုင်ငံတကာမိသားစုရဲ့ စောင့်ကြည့်ကာကွယ်မှုကို လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်မှာ ဒုတိယအာဇာနည်နေ့ ထပ်မံမပေါ်ပေါက်ရေး သို့မဟုတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ ပက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အကြံစည်မှကာကွယ်ရေးဟာ လူစိတ်မကုန်သေးတဲ့ နအဖ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း နှိုးဆော်သတိပေးအပ်ပါတယ်။ဒါဟာ အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာ ကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်၊ လက်ငင်းအမျိုးသားရေး တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်ကျော်သန်း